Igodo atọ iji mejupụta ọdịnaya gị | Martech Zone
Wednesday, February 25, 2009 Sunday, May 29, 2016 Douglas Karr
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eji otu teknụzụ eme ihe masịrị ha ma ọ bụ nwee ntụsara ahụ ma leghara ndị ọzọ anya. Abụ m nnukwu onye na-akwado akpaaka na ndị na-ere ahịa na-ebugharị ozi ha n'ụzọ ọ bụla, ọdịdị, ma ọ bụ ụdị - ka ọ ghara imerụ mbọ ahịa ha.
N'ihe banyere otu ụlọ ọrụ na-eji ọdịnaya eme ihe site na saịtị ya, isiokwu ya, akwụkwọ akụkọ ọcha, nyocha ọmụmụ ma ọ bụ blọọgụ ya, ekwenyere m na enwere igodo atọ iji mee ka ọdịnaya gị rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ akara gị:
Nọrọ mkpa - gbado anya na, n'agbanyeghị agbanyeghị ọnwụnwa, gbalịa hụ na ị na-agwa ndị ahịa gị ma ọ bụ atụmanya gị okwu. Nke a ga - enweta ikike gị na aha ọma gị ọsọ ọsọ karịa ma ọ bụrụ na ị nafere ma ọ bụ gbanwee site na izi ozi gị.
Kpọsaanụ mgbe niile - enwere olile anya na ndị ahịa nọ ebe ahụ chọrọ ọdịnaya gị, mana amaghị na ọ dị. Nyefee akụkọ na ọrụ ndị ọzọ, pịa pịa, tinye njikọ na ndekọ aha, gbakwunye na mkparịta ụka na ọgbakọ dị mkpa, kwalite isiokwu gị site na ngwaọrụ ndokwa mmekọrịta mmadụ na ibe gị, nyefee saịtị akụkọ, wikis, wdg. Bụrụ onye na-ede blọgụ ọbịa na ikwu okwu na blọọgụ ndị ọzọ na njikọ azụ gị ọdịnaya. Tinye njikọ na akwụkwọ ọnụahịa gị, aha email gị, kaadị azụmahịa gị… ebe niile!
Syndicate N'ebe nile - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla nwere atụmatụ maka ibipụta ndepụta RSS gị na ọrụ ha. Jiri ọ bụla otu! Ọtụtụ ndị na-eji otu netwọkụ eme ihe ma ghara ịkpafu, hụ na ọdịnaya gị bụ ebe ha chọrọ ịchọta ya! Kwusaanụ na Twitter, Kwa!
'Ve tinyela ọrụ ike gị ma dee ọtụtụ ọdịnaya dị mkpa. Ugbu a rụọ ọrụ iji hụ na ọdịnaya na-elebara anya nke ọma!
Tags: ọdịnaya ọdịnayakpọsaanụkwupụta ọdịnayamkpaọdịnaya dị mkpanọrọ mkpaụkọ
Feb 25, 2009 na 8:26 PM
Ndụmọdụ dị mma.
Ugbo agha gị: Mkpa dị mkpa
Otu ihe bxkwa dikwa mkpa bx togbasa usoro. Dịka ọmụmaatụ atụmatụ anyị bụ:
- soro ndị na-ere ahịa mgbasa ozi na-ekwurịta atụmatụ, ịhazi, mkpa na mmetụta
- - gụọ ihe niile bipụtara site n'aka ndị isi (Brogan, Owyang…)
- tinye aka na etiti anwansi (ndị nwere mmetụta dị ịrịba ama ma nwee ezigbo ihe ọmụma na isiokwu ahụ).
Akọwaala m usoro anyị na nkọwa ndị ọzọ ebe a: http://blog.ecairn.com/2009/02/18/fighting-social-media-fear/
A nabatara nzaghachi ọ bụla.